Izinwele kunye nobumfihlo, ukungenelela okanye amava omsebenzisi? | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 12, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Rhoqo emva kweeveki ndindwendwela indawo endihlala kuyo Ii-Supercuts. Andisoloko ndifumana ukusikwa okugqibeleleyo, kodwa akubizi kwaye abantu abasebenza apho bahle kakhulu. Eyona nto ibaluleke kakhulu, kukuba iiSupercuts zikhumbula ukuba ndingubani. Xa ndingena, bacela igama lam kunye nenombolo yomnxeba, bayifake kwinkqubo yabo, kwaye bafumana inqaku emva kwexesha elide ukusukela iinwele zam zokugqibela kunye nendlela endiyithandayo (# 3 ejikeleze ngesikere esikwe ngaphezulu , emi ngenxalenye).
Sebenzisa ulwazi (lwabucala) endikunikileyo kwenza ukuba amava am omsebenzisi kunye ne-Supercuts ngcono kwaye kundigcina ndibuya. Umxholo onomdla, huh? Ndiyathanda ukuhamba rhoqo kwiindawo apho bakhumbula khona igama lam, ndiyithanda njani ikofu yam, indlela endithanda ngayo iihempe zam zihleli, okanye nokuba ndiyithanda njani inwele zam ezisikiweyo! Ndibuya ndiphindaphinde kuba amava angcono kakhulu. Ndihleli kwiihotele ezintle apho ndandimangalisiwe xa i-concierge yenza inqaku lokukhumbula igama lam. Yinto encinci yomgudu endigcina ndibuyela kunye nokwandisa ishishini lam. Iinkampani eziqokelela kwaye zisebenzise idatha zombini ziyimpumelelo kwaye ziyaxatyiswa.
Izixhobo zam, iisayithi, kunye nemikhwa kwi-Intanethi akufuneki yahluke, akunjalo? Ndithumela ulwazi… ngamanye amaxesha ulwazi lomntu siqu ... kwiindawo ze-intanethi kunye neenkqubo ukwenzela ukuphucula amava am nabo. Amazon Ndilandela izinto endizithengileyo ndize ndicebise ngezinto ezongezelelekileyo endinokuba nomdla kuzo. Ukuba ndaya kwibhlog enkulu, iGoogle Adwords ehamba nomxholo inokundikhomba kwimveliso okanye kwinkonzo endinomdla kuyo. indawo yam, ulwazi lwam lungagcinwa kwiKuki ukuze lubonakalise ukuze ndingazalisi ulwazi kwakhona. Oku kuhle! Iyandongela ixesha kwaye indifumanele iziphumo ezingcono. Ayisiyiyo le nto ingako malunga?
Inyani yokuba yonke into oyenzayo kunye nedatha oyibekayo kwi-Intanethi inokusetyenziselwa ukuphucula amava akho omsebenzisi kumnandi, ayongxaki. Idatha iqokelelwa ngokuzithandela, ewe. Awudingi ukwamkela ii-cookies, ungene kwiiwebhusayithi, usebenzise abanye, okanye uqhagamshele kwi-Intanethi kwaphela. Kum, ubumfihlo abuyongxaki kwaphela, ukhuseleko ngumba. Imfihlo yamazwe aphesheya kutsha nje emva kokuba uGoogle ebanike olona lawulo lubi kakhulu 'kubucala'. Njengoko ndifunda inqaku, ndacinga ukuba yinto enqabileyo yokwenza. Ingqokelela yeGoogle yedatha yeyokwakha amava angcono kubasebenzisi bayo kunye nokudibanisa ishishini kubathengi.
Eyaziwayo kuGoogler, UMat Cutts uphendule kwiMfihlo yaNgaphandle ngempendulo eneenkcukacha endicinga ukuba ibethelelwe ngokwenene. UGoogle wenza umsebenzi omangalisayo ngokhuseleko- ugqibele nini ukuva malunga nedatha yabucala etyholwayo okanye ekhutshwa ngengozi kuGoogle?
UGoogle akathengisi idatha kuye nakubani na, imodeli yabo kukuvumela amashishini ukuba afikelele kwinkqubo yawo, abathengi bayifumane, kwaye uGoogle uyabadibanisa bobabini. Leyo yindlela engakholelekiyo nexabisekileyo kum. Ndifuna uGoogle afunde okuninzi ngam kangangokuba amava am asebenzisa isoftware yawo aya ephucuka yonke imihla. Ndifuna ukufikelela kwiinkampani abazicebisayo kum-abanokuba nemveliso okanye iinkonzo endinokuba nomdla kuzo.
Ubungasese bamazwe ngamazwe buya kuba njani kwii-Supercuts ezilandelela ukuba ndivakatye kangaphi, ngubani amalungu osapho lwam, kwaye zeziphi iinwele zethu ozikhethayo? Ndicinga ukuba bafuna iSupercuts ukuba iyeke ukuqokelela olo lwazi. Kuya kufuneka ke ndizicacise qho xa ndindwendwela… ndide ndime ndize ndifumane omnye umntu wenza gcinga umngqa.
Ndicinga ukuba eyona nto iphambili yile… iinkampani ezithi Xhatshazwa idatha yakho kufuneka ithintelwe, kodwa iinkampani ezenza oko ukusebenzisa idatha yakho kufuneka ivuzwe. Sukuyeka ukundilandela, Google! Ndiyawathanda amava owanikezelayo.
Ndiyabathanda abantu kwiiNtengiso…
Juni 12, 2007 ngo-3: 39 PM
Juni 12, 2007 ngo-4: 30 PM
wena are important! 🙂